Nagarik Shukrabar - केकीकाे फ्यान हुँदा.....
आइतबार, ०७ कार्तिक २०७८, ०० : ०१
मङ्गलबार, २२ पुष २०७६, १० : ५६ | शुक्रवार
ऊसँग रिलेसनमा बसेको करिब करिब आठ महिना जति भएको छ। सुरुमा उसैले मलाइ प्रपोज गरेकी थिई। सम्बन्ध ठीकै थियो तर हिजोआज साना–साना कुरामा पनि झगडा मात्र गर्न खोज्छे। म केकी अधिकारीको ठूलो फ्यान हुँ। अझ भन्ने नै हो भने त ऊ मेरो क्रस नै हो भन्छु। फेसबुकमा पनि केकीका धेरै फोटो राख्ने गरेको छु।
एक दिन मैले मेरो फेसबुकमा केकीको एउटा राम्रो फोटो खोजेर राखेँ। यो देखेर उसले मलाई एसएमएस गरी। ऊ अर्थात्, जोसँग म अहिले रिलेसनमा छु। उसले एसएमएसमा लेखेकी थिई, ‘के पारा हो ? जहिले केकीको मात्र फोटो राख्ने ? मलाई यस्तो गरेको मन पर्दैन।’
मलाई उसको शैली मन परेन। त्यसैले मैले पनि उसलाई उसैको जस्तो जवाफ फर्काएँ, ‘केकी तिमीलाई मन नपरेर के भयो त ? मलाई त मन पर्छ नि !’
त्यसपछि त उसले के के हो, के के एसएमएस गरी। आजदेखि मसँग बोल्नु पर्दैन रे, त्यही केकीसँग बोल्नू, उसैसँग कुरा गर्नू अनि उसैसँग बिहे गर्नू रे !!!
उसको यस्तो जवाफ देखेर म त के लेखूँ के भएँ। एएएमएस सिन गरेँ तर केही रिप्लाई दिइनँ।
मेरो जवाफ नआएको केही क्षणपछि उसले रुँदै फोन गरी। भनी, ‘म अब तिमी र केकीको बीचमा कहिल्यै आउँदिनँ। सरी, आजसम्म जे जस्तो भयो मलाई माफ गर्देऊ रे !’
केही नबोली फोनमा लामो समयसम्म सुँक्क सुँक्क गरी रोइरही।
मलाई उसको यस्तो व्यवहार सपना हो कि विपनाजस्तो लागिरहेको थियो। म केही बोलिनँ, मात्र उसका कुरा सुनिमात्र रहेँ।
त्यसपछि उसले एक्कासि भनी, ‘तिमीलाई केकी चाहिन्छ कि म ?’
मैले हत्तपत्त भनेँ, ‘मलाई तिमी नै चाहिन्छ नि !’
उसले ‘बाँदर’ भनी र त्यसपछि जे थपी, म त वाल्ल परेँ। उसले भनी, ‘अबदेखि त्यो केकीको फोटो राख्यौ भने म तिमीसँग कहिले पनि बोल्दिनँ, सिधै ब्रेकअप !’
मैले उसलाई सम्झाउने प्रयास गरेँ, भनेँ, ‘हेर तिमी कति साँघुरो सोचाई भएकी मान्छे ? एउटी हिरोइनको फोटो राख्दा पनि झगडा गर्न खोज्ने ? तिमीसँग चिनजान भएको आठ महिना जति मात्र भयो तर केकीलाई मैले विगत आठ वर्षदेखि चिनेको छु। के मैले उसको फोटो राख्न नपाउनु ?
यति साँघुरो सोचाई भएकी केटीसँग रिलेसनमा बस्दा ठीक होला कि नहोला सुझावको अपेक्षामा छु।